mysansar – Page5– MySansar
सामुदायिक वनको शल्यक्रिया
Posted on August 7, 2019 August 7, 2019 by mysansar
कृष्ण रिमाल नेपालले अवलम्वन गरेको नीति मध्ये सोच अनुरुपको सफलता पाएको नीति सामदायिक वन नीति मा नेपाल सफल भएको छ। दक्षिण एसियाका बगलांदेश भारत जस्ता अरु थुप्रै देशले यो नीतिको कपी पेस्ट गरेका छन। हरियो वन नेपालको धन भन्ने मुल मर्मका साथ स्थापित यो नीतिमा अब केहि सधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म मेरो समुदायको… Continue reading
ह्रदयेन्द्र- हुन नसकेका ‘बेबी किङ’ यस्ता भएछन्
Posted on July 31, 2019 August 1, 2019 by mysansar
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि नवयुवराजका रुपमा चिनिने र बेलाबेलामा बेबी किङका रुपमा चर्चामा ल्याइने ह्रदयेन्द्र शाह हिजो १८ वर्ष पुगेका छन्। राजतन्त्र कायम रहँदा उनी राजगद्दीका दोस्रो नम्बरका उत्तराधिकारी थिए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले पास गरेको नयाँ कानुनमा राजाको जेठो सन्तान गद्दीको उत्तराधिकारी हुने व्यवस्था गरिएपछि उनको गद्दी उत्तराधिकारी हक खोसिएको थियो। अर्थात् नेपालमा… Continue reading
आज गथां‍मुगः भूतप्रेत, तन्त्र साधनाको रहस्यमय दिन
Posted on July 30, 2019 July 30, 2019 by mysansar
मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा गथांमुगः चाड मनाइँदैछ। यो दिन फलामको औँठी, लैँचा (मेहन्दी) लगाइन्छ र भूतको पुत्ला जलाइन्छ। आजको रात तन्त्रमन्त्रको कुविद्या सिक्नेहरु औँलामा मैनबत्ती बालेर आउँछन् भन्ने कथा ठूलाले सुनाउँदा सानोमा खुब डर लाग्थ्यो। भूतप्रेतको कुरा अहिले अलि अपाच्य लागे पनि यो हाम्रो परम्पराले स्वीकारेको विषय हो। पश्चिमी संस्कृतिमा पनि भूतप्रेतकै हालोइन पर्व मनाउने गरिन्छ।… Continue reading
नामै नसुन्या पत्रिकालाई किन बाँड्ने राज्यकोषबाट लाखौँ रुपैयाँ?
Posted on July 10, 2019 July 10, 2019 by mysansar
-मदनमणि अधिकारी- दुनियाँका खबर साप्ताहिक नामको पत्रिका कहिले देख्नुभएको छ? दिव्य चक्षु साप्ताहिक कहिल्यै पढ्नुभएको छ? अग्नि वाण पाक्षिक नाम सुन्नुभा छ? समय सन्दर्भ पाक्षिक पसलमा कतै देख्नुभा छ? तपाईँले नसुनेको, नपढेको भएर के गर्नु, यी काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने ‘क’ वर्गका पत्रिका हुन्। तपाईँलाई सुसूचित गरेको नाममा सरकारले यी पत्रिकाहरुलाई मासिक २६ हजार २५० रुपैयाँ… Continue reading
…अनि मेरो कविताको किताब ‘बेस्ट सेलर’ बनिछाड्यो
Posted on June 25, 2019 June 25, 2019 by mysansar
-राजु- लामो समयको अन्तराल पछि आफूले पढेको स्कुलको वार्षिकोत्सव समारोहमा कविता वाचन गर्ने अवसर पाउँदा आज मलाइ निकै खुशी लागिरहेको छ । तर आज म सामान्य व्यक्तिको रुपमा हैन, प्रख्यात कविको रुपमा यहाँ उभिएको छु । कविता लेख्न त्यति सजिलो कहाँ छ र ? मैले पनि निकै दु:ख गरेर अहिलेको यो प्रख्याति कमाएको हुँ ।… Continue reading
६२ औं राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा हेम प्रभासको कविता पहिलो भएको छ। सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भएको प्रतियोगितामा धादिङ घर भएका हेम प्रभासको कविता सर्वोत्कृष्ट भएको हो। कविताको शीर्षक ‘परदेश गएका पतिको नाममा’ हो। कविता यस्तो छ- मेरो हजुर मैले यी आँखाहरुमा हजुरलाई सजाएकी छु, हजुर खस्नुहुन्छ कि सोचेर आजसम्म रोएकी छैन।
किन एक्लिए ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री : सुधीर शर्माको विश्लेषणमा चार दृष्टान्त
Posted on June 20, 2019 June 20, 2019 by mysansar
झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै ‘सर्वशक्तिमान’ देखिन्छन् । तर मेरो विचारमा उनी विस्तारै घेरिन र एक्लिन थालिसकेका छन्, आफैंभित्र र बाहिरबाट, मूलतः आफ्नै कारणले । हालैका केही दृष्टान्त : • सडक : असार ४ गतेको मण्डला-प्रदर्शन जति ठूलो थियो, त्यसभन्दा ठूलो त्यसले दिएको सन्देश हो । गैरराजनीतिक मुद्दामा जनता यसरी सडकमा आउन थाल्नु… Continue reading
Posted on June 15, 2019 June 18, 2019 by mysansar
– शुषमा मानन्धर – ऊ लुगामा साबुन दल्दै थिई । उसका आँखा, श्रीमानलाई मनपर्ने कमिजमाथिको दागमा प¥यो । त्यहाँ, ओठको बान्की देखिने गरी रातो लिपस्टिकको दाग लागेको थियो । त्यसरी लिपस्टिकै लाग्ने गरी ऊ श्रीमानसँग कहिल्यै टाँसिएकी थिइन । उसलाई झनक्क रीस उठ्यो । पछिल्लो पटक उनले त्यो कमिज कहिले लगाएका थिए, उसले सम्झन खोजी… Continue reading
-प्रदीप गिरि- उर्दु भाषा लेख्दा माथि यसो चन्द्रबिन्दु हाल्नुभो भने त्यही शब्दको अर्थ ‘खुदा’ लाग्छ। चन्द्रबिन्दु हटाइदिनुभो भने त्यही शब्दको अर्थ ‘जुदा’ लाग्छ। एउटाको अर्थ God, एउटाको अर्थ Separate। यस बजेटमा थुप्रा कुरा छन् जसलाई म ठीक भन्छु, थुप्रा कुरा छन् जसलाई म बेठीक भन्छु। त्यता म जान्नँ। यसमा एउटा कुरा छ, मैले वर्षौँदेखि भन्दै… Continue reading
जयशंकर भारतमा विदेशमन्त्री : चिन्ता हैन पाठ सिकौँ
Posted on June 3, 2019 by mysansar
भारतीय विदेश मन्त्रीमा एस. जयशंकरको नियुक्तिले नेपाली मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका चिन्ताको तरङ्ग विगत पहिल्याउँदा विभिन्न दृष्टिकोणमा जायजै होलान्। उनी हाम्रा कूटनीतिक र परराष्ट्र सेवामा रहेका कतिपय दहीचिउरे जस्ता बिना होमवर्क नै आउने खालका भने पटक्कै होइनन्। उनको नियुक्ति नेपाल लक्षित होइन भन्ने कतिपय टिप्पणीकारहरूले खुलाएका छन्। जयशंकर समय र अनुभवले खारिएका एक… Continue reading
व्यङ्ग्य : मानार्थ पिएचडी अनि सुशासनको प्रमाणपत्र
Posted on June 1, 2019 June 2, 2019 by mysansar
—राजु अधिकारी- बच्चा बेला उनलाई स्कूल जान र पढ्न पटक्कै रुचि हुँदैनथ्यो। त्यति बेला गाउँमा नजिकै स्कुल पनि थिएन अनि पढ्ने चलन पनि त्यति थिएन। शहरतिर उनका उमेरका अरूहरूले पढ्दै गर्दा उनको अधिकांश समय चाहिँ गाउँका भीरपाखाहरुमा घाँस दाउरा काटेर बित्यो। पढाइ भन्दा उनलाई त्यही रमाइलो लाग्थ्यो, त्यसो गर्दा स्कुल नजानको लागि बहाना पनि मिल्थ्यो।… Continue reading
विदेशका नेपाली रेस्टुरेन्टहरुमा नेपालीले गर्छन् नेपालीको श्रम शोषण
Posted on April 20, 2019 April 20, 2019 by mysansar
-हेल्सिन्गिन सानोमात- सुमनले केही महिना काम गरेपछि छुट्टी पाउन थाले। नझुक्किनुस् छुट्टीको अर्थ आराम हैन, सुमनको लागि छुट्टीको अर्थ सात घण्टा मात्र काम गर्नु पर्ने दिनहरु हुन्। साधारणतया कामको शिफ्ट बिहान ९ बजेतिर सुरु भएर राति करिब दश बजे रेष्टुरेण्ट बन्द भएपछि मात्र सकिन्थ्यो। कहिलेकाहिँ हप्तामा ८० घण्टा सम्मको पनि काम हुन्थ्यो। सप्ताहन्त र चाड… Continue reading
एयरलाइन्सको अनलाइन टिकट किन्दा भएको अलमल
Posted on April 11, 2019 by mysansar
-संकल्प पोख्रेल- प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै घरै बसेर आफ्नो काम फत्ते गर्न सजिलो भएको छ। इसेवाको म पुरानै ग्राहक हुँ। इसेवाका अधिकतम सेवाहरु प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। यसको सजिलो पक्ष धेरै छ भने असजिलो पक्ष पनि छ। असजिलो पक्ष यो हो कि इसेवामा सबै बैंकबाट रकम ट्रान्सफर गर्न पाइँदैन। उदाहरण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हो। अरू पनि… Continue reading